Doko nomerika avo lenta an'ny Dead Slug | Famoronana an-tserasera
RPGs dia ekena tsara amin'ireo ambaratonga tokony hataonao ireo mitsangàna tsy azo esorina hahafahana miatrika ireo sefo farany na biby goavam-be avo lenta izay matetika manome ny fitaovana tsara indrindra rehefa resy izy ireo. Ireto RPG ireto dia efa niaraka taminay nandritra ny am-polony taona maro ary tao anaty Internet no nahitana azy indrindra tamin'ny lalao video toy ny World of Warcraft.
DeadSlug dia mitondra antsika ny fahasamihafana lehibe mety misy tarehin-tsoratra roa manatona sefo farany miaraka amin'ny ambaratonga avo dia avo toy ity takelaka antsoina hoe "Level UP" ity. Sary iray manasongadina ny fiverenan'ireo saha izay ahitantsika bibikely ny haavontsika mba hananana traikefa ary amin'ny fotoana hafa dia afaka miverina any amin'io lehibeny io isika handresy azy.
Takelaka hosodoko nomerika miaraka amin'i fomba voafaritra tsara ary manana kalitao teknika lehibe izay mametraka antsika eo alohan'ity sefo farany lehibe sy lehibe ity izay ny ambaratonga azy, 666, dia manondro izay sisa tsy maintsy resena rehefa miatrika "mahery fo" roa miaraka amin'ny ambaratonga 64 sy 23 isika. nantsoina rehefa nanatona talohan'ny lehiben'ny hery lehibe toy izany, teboka an-tapitrisany maro amin'ny fiainana ary fiarovana an'arivony.
Na izany na tsy izany, ny fananan'ny sefo habe toy izany dia tsy midika hoe mahery kokoa izy io, na dia manampy eto aza izy io manondro ny fahasamihafana lehibe izay misy eo amin'ireo mahery fo kely roa sy ilay aloka izay manakaiky ny lanitra mihitsy hahitana izany haavo 666 izany.
DeadSlug dia misy ao Deviant Art for mahalala asa bebe kokoa raha irinao. Ity sombin-javatra ity dia azo jerena tsara amin'ny iray amin'ireo sary an-tsary fa ny lalao RPG tsara indrindra dia matetika no hita eo amin'ny efijery misy azy, koa tsy ho gaga isika raha toa izany tamin'ny fotoana iray ho an'ny hoavin'ity mpanao sary ity.
Daniel Foust dia mpanazava iray hafa izay mampiasa nomerika manaitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » 'Level UP' avy amin'i DeadSlug ary ny talen'ny farany alohan'ny "noobs" kely roa